Waxbad Ka Ogoow Faa’iidooyinka Cunista Qudaarta – Beegsonews-Wararka maanta
Home Caafimaadka Waxbad Ka Ogoow Faa’iidooyinka Cunista Qudaarta
Qormada Todobaadka ee Arrimaha Bulshada waxaynu kaga haldi doonaa faa,iidooyinka Cunista qudaarta aad ayay caafimaadka ugu fiicantahay. Waxanna ay leedahay waxtar xaga kobcinta jidhka iyo difaaciisaba. Waa muhiim in aad cuntid marwalba qudaarta.
Waa iskumid hadii aad cuntid midho cusub ama fresh ah, kuwa laqalajiyey ama kuwa laqaboojiyey. Haddii aadan heli Karin midho fresh ah waxaad marwalba iskudaydaa inaad cabtid cibtaanka midhaha lashiiday ama aad cuntid Midhaha
Waxa marwalba fiican in aad il gaar ah aad u yeelatid sida aad u cuni lahayd cunto dheylatiran oo kamid ah Midhaha, adaba haddii aad tahay qofka marwalba jecel inuu cuno hilibka waxa kuu fiican in aad
yaraysid cunista hilibka.
Cunidda Midhaha ama qudaartu waxa ay yareyaan Cudurada halista ah ee ku dhaca wadnaha, haddii aad marwalba aad cuntid midhaha ama cabtid Cabitaankooda (juice) waxa ay kaa fogeeynayaan cuddurada kudhaco wadnaha. Cuduradaas oo ka mid ah sida Wadna xanuun, Dhiigkar iyo kansar.
Midhaha waxaa kale oo aad ka heli kartaaa nafaqo kordhiso ama adkeeysa difaaca jidhkaaga iyo lafaha.
Midhah Waxa ay kordhinaysaa awooda jidhka uu ku shaqeeyo sida wadnaha iyo aragtida indhaha, iyo u adkeysashada jidhka ee cuddurada qarkood, Waxana ay jidhka ka difaacdaa cuduraha kudhaca guud ahaan sida cadcadaadka jidhka iyo in uu jidhka dil dilaaco.
Furuutka ama qudaarta waxa ay leeyihiin fitamin iyo mineral kuwas oo siiya jidhka caafimaad iyo soo jiidasho qurux badan leh.
Haddaba haddii aynu si gaara isu dul taagno Cunista Tufaaxa Iyo Faa’iidooyinka uu u Leeyahay Caafimaadka Bani’aadamka
Tufaaxu waa midho ka mid ah khudaarta. Geedka tufaaxa oo saynis ahaan lagu magacaabo Malus domestica waa geed midho macaan leh kaasi oo la cuno khudaarta uu dhalo. geedka tufaaxu wuxuu asal ahaan markii ugu horeysay laga helay badhtamaha qaarada Aasiya, halkaasoo la sheegay in ilaa maanta laga helo noocyo badan oo tufaax ah. Haddaba waxaanu halkan ku eegi doonaa waxyaabo muhiim u ah caafimaadka oo uu ka hortag iyo daawaba uu u yahay Tufaaxu.
1- Nafaqo Dabiici Ah
Ugu yaraan halkii xabo ee Tufaax ahba waxa ku jira afar garaam oo maadada Fiber, taasoo qofka caawisa in cuntada uu cunaa ay si fiican u dheef-shiidanto. Sidoo kale il qani ku ah oo laga helo Fiitamiin C.
2- Miisaan Dhimista Jidhka
Tufaaxu waa khudaar lagu gaajo baxo, laakiin la yaab maaha inuu sidoo kale yahay midhaha nafaqo ah, isla markaana door ka qaata inuu hoos u dhigo miisaanka fuula jidhka. Sid ay caddeysay daraasad laga sameeyay haweenayda maalintii cunta hal xabo Tufaax ah, waxay sannad gudihii ku luminaysaa culeys badan oo uu sababay hilibka jidhka fuula, waxaanay ka badbaadaysaa khatarta duxda subbaga dhiigga raaca iyo wadne waxyaabaha keena wadne xanuunka.
3- Caafimaadka Wadnaha
Daraasad la samaynayay 20 sanno, isla markaana laga sameeyay in ka badan 34 kun oo dumar ah ayaa caddeysay in isticmaalka Tufaaxu uu ka hortago xanuunnada halista ah ee ku dhaca wadnaha iyo guud ahaan xanuunnadaba. Sidoo kale culimadii samaynaysay daraasadda ayaa sidoo kale caddeeyay in dadka quuta Tufaaxu ay ka badbaadaan xanuunka Faaliga, halka kuwa isticmaalaa ay uga dhaw yihiin halista xanuunka Faaliga.
4- Ka hortagga Xanuunnada aan dawada lahayn
Dadka cuna Tufaaxa ayaa sida ay dhakhaatiir badani caddeeyeen waxay inta badan ka badbaadaan xanuunnada halista ah ee aan dawada lahayn sida Macaanka iyo Dhiig-karka, sababtoo ah Tufaaxu waxa uu yareeyaa heerka korodhka Barotiinka jidhka, kaasoo haddii uu jidhka ku bato saameeyaa unugyada dhiigga, isla markaana halis ku ah hanaanka wareegga dhiigga iyo shaqada wadnaha.
5- Tamar gelinta Jidhka
Cunitaanka Tufaaxa ka hor intaanu qofku shaqo tagin, waxa uu jidhka galiyaa firfircooni dheeraad ah. Tufaaxu waxa uu xoojiyaa Antioxidant, taasoo qofka ka caawisa inuu hab-dhiskiisa neef-shadu si fiican u shaqeeyo.
By:Sagal Abdirahmaan Ahmed(filibiin)
Previous articleSomaliland: Wakhtiga Qabashada Shahaadooyinka Murashixiinta oo la Muddeeyay
Next articleGuddoomiyaha Maxkamadda sarre oo Qaabilay Madaxa Bariga iyo Bartamaha Afrika u Qaabilsan Ururka Dhismaha Nabada
Akhbaarta wanaagsan ee Coronavaris …oo loo helay Talaal oo lagu tijaabinaayo...